Waxsoosaarka iyo Warshad Karootada Shiinaha | Nongchuanggang
Sharaxaadda waxsoosaarka karootada ee Meshed: Karootada nafaqeysan ee nafaqada leh ma aha oo kaliya dhadhamin tijaabin ah, laakiin sidoo kale waxaa loo tixgeliyaa cuntada caafimaadka ka hortagga kansarka, cuntada halkaas ku jirta ayaa leh waxyaabo badan oo carotene ah, ka dib marka ay jidhka gasho ayaa loo beddelayaa fiitamiin A, waxay u horseedi kartaa unugyada kansarka si aad ah ayuu hoos ugu dhacay, karootada mesign ee lignin sidoo kale waa maaddooyin dabiici ah oo looga hortago kansarka, sidaa darteed dadku badanaa waxay cunaan dabacasaha la shiiday waxay yeelan karaan saameynta ka hortagga kansarka.
Karootada loo yaqaan 'Meshed karooto' waa nooc ka mid ah cuntada la sameeyo ka dib markii karootada ay uumiso, carotene-ka gudaha ku jira ayaa hagaajin kara shaqada jidhka bini'aadamka, waxay yareyn kartaa dhacdooyinka dhiig-yaraanta iyo dhiig qabow, marka lagu daro cunnada noocan oo kale ah hodan kuma aha potassium, sidoo kale waa sidoo kale waa qayb muhiim u ah ilaalinta caafimaadka aadanaha.
Faytamiin A-ga ku jira dabacasaha ayaa kor u qaadi kara nuugista kaalshiyamka, kalsiyumkuna waa qayb ka mid ah lagama maarmaanka u ah caafimaadka lafaha, sidaa darteed cunista dhoobada karootada waxay hagaajin kartaa heerka caafimaadka ee lafaha, waxay yareyn kartaa dhacdooyinka lafaha iyo cudurrada wadajirka ah. Intaas waxaa sii dheer, dhoobada karootada ayaa wali leh saameynta calool jilicsanaanta caloosha, fiberka cuntada ku jira gudaha ayaa jilcin kara nafaqada nafaqada ee saxaro, waxay dardar gelin kartaa jiilka saxarada iyo dheecaanka.
Ta labaad, waxaa jira 3 faa iidooyin waaweyn oo ay carruurtu u leeyihiin in ay cunaan karooto shiidan.
1, ilaali caloosha, kahortag shubanka iyo astaamaha kale.Habka caloosha ee caloosha waa mid aad u jilicsan, gaar ahaan marka ugu horeysa ee lala kulmo cuntada banaanka. Haddii cuntada dhameystiran ay aad u badan tahay ama cuntada dheeriga ah aysan nafaqo ku filnayn, waxay u badan tahay inay ilmaha u keento raaxo-darrada caloosha iyo calaamadaha shubanka. Karootada waxaa ku jira pectin, oo ka hortagi kara shubanka. Markaa inaad siiso ilmahaaga dabacasaha la shiiday waxay kaa caawin kartaa kahortaga shubanka.
2. Nuug nafaqada oo kor u qaad jimicsiga jirka.
3. Dareemo dareemo oo u diyaar garowga naas-nuujinta. Karootada la nadiifiyey ayaa ka caawin kara ilmahaaga inuu dareemo inuu dareemo marka qadarka caanaha naaska si tartiib tartiib ah loo yareeyo.
Xiga: Karootada budada ah
Karootada budada ah